Sina Inona no marika famantarana ny amboradara? Mpanondrana sy vokatra | Evergreen
Inona no marika famantarana ny amboradara?
Trano faha-2, No. 5, Guxia Industrial 2nd Rd., Shipai Town, Tanànan'i Dongguan, faritanin'i Guangdong, Sina
Ny karatra fanaovana amboradara dia antsoina koa hoe karatra fanaovana amboradara, na fehiloha peta-kofehy raha fintinina. Tsy mitovy amin'ny amboradara nentim-paharazana, mora kokoa ny mampifanaraka ny akanjo, ary ny akanjo vita dia azo apetaka amin'ny marika amboradara ihany koa mba hahatratrarana ny vokany.
Ny mariky ny peta-kofehy dia mazàna vita amin'ny masinina fanaovana amboradara amin'ny solosaina. Rehefa vita izany dia azo ampiasaina amin'ny haingon-trano amin'ny akanjo, kiraro, haingon-trano anatiny ary akanjo fiasana. Ny karatra fanaovana amboradara dia karazana kojakoja fitafiana.
Ny akora ampiasaina ao amin'ny toko amboradara dia kofehy sy lamba amboradara. Satria mitana andraikitra lehibe ny mifanandrify amin'izy ireo, ny fomba fisafidianana lamba mifototra amin'ny sary hahatratrarana ny vokatra tadiavina dia miankina amin'ny traikefa voangona sy fahalalana eo amin'ny indostria.
Izahay, Renshi Industrial Co., Ltd. dia nanolo-tena tamin'ny famokarana marika tenona efa ho 10 taona mahery, ary mpanjifa maro ao an-trano sy any ivelany no niara-niasa. Ny fahalalana marika tenona matihanina dia mahatonga antsika hatoky tena bebe kokoa ary afaka miavaka amin'ny orinasa isika. Raha mieritreritra ny hamolavola LOGO manokana ho an'ny orinasanao hitafy akanjo miasa ianao dia afaka mahita anay ianao. Raha ekipa, kilasy ary te-hanao peta-kofehy vita amin'ny lamba fanamiana ianao, dia azonao atao ihany koa ny mahita anay, raha ozinina mitafy lamba ianao, ozinina akanjo, vao mainka ilaina ny mandray anjara amin'ny asanay!
Manantena am-pahatsorana izahay fa afaka manompo anao tsaratsara kokoa amin'ny sehatry ny fanenomana labozia! Mino izahay fa ny indostrian'ny akanjo dia ho onja lehibe hatrany amin'ny fironana, ary ny famokarana marika famantarana ny peta-kofehy, izay mpitarika ny sokajy fitafiana, dia hampiseho onja mahatalanjona amin'ny onja!
Image Sary santionan'ny vokatra vita amin'ny peta-kofehy roid
Chenille Varsity Letter T Patch , Hook Ary Loop mpanenona Badge , Chenille Patch Letters , Chenille Letter , peta-kofehy Badge, Chenille Varsity Letter , rehetra Products- 粤 ICP 备 18108880 号 -1